ch 8 uphawu – 2fish
ekhaya / Bible / YeVangeli kaMarko / ch 8 uphawu
8:1 Ngaloo mihla, kwakhona, xa kwakukho isihlwele esikhulu, kwaye abazange babe idliwayo na, ubiza ndawonye abafundi bakhe, Wathi yena kubo:
8:2 "Ndisikwa yimfesane ngenxa yezihlwele, ngenxa, khangela, baye banyamezela kunye nam ngoku iintsuku ezintathu, kwaye kungekho nto ukuba badle.
8:3 Kwaye ke ukuba ndabandulula baya emakhayeni abo bengadlanga, ukuze batyhafe endleleni. "Kuba inxenye yabo ivela kude.
8:4 Bamphendula abafundi bakhe, besithi, "Ukusuka apho umntu kukwazi ukufumana isonka ngokwaneleyo kubo entlango?"
8:5 Kwaye ke wababuza, "Zingaphi na izonka eninazo?"Kwaye bathi, "Sixhengxe."
8:6 Wayalela isihlwele ukuba sihlale phantsi ukuba badle emhlabeni. Ezithabathile ke izonka zosixhenxe, ubonga, wasiqhekeza, wanika abafundi bakhe, ukuze endaweni phambi kwabo. Kwaye bahambisa ezi phambi kwesihlwele.
8:7 Baye neentlanzana ezimbalwa. Wabasikelela, waza wayalela ukuba zibekwe phambi kwabo.
8:8 Kwaye badla banela. Bayithwala ke noko kwakugqityiwe esiseleyo ukususela amaqhekeza: iingobozi zasixhenxe.
8:9 Ke kaloku abo babesidla babengamadoda ngamawaka amane. Ke yena asindululayo kubo.
8:10 Kwaye ngokukhawuleza yanyukela abe esikhitshaneni kunye nabafundi bakhe, waya kumacala waseDalmanuta.
8:11 Kwaye ke abaFarisi baphuma baza basukuzana naye, befuna kuye umqondiso ovela ezulwini, bamlinga.
8:12 Kubaleke kanzulu ngomoya, uthe: "Yini na ukuba esi sizukulwana singxamele umqondiso? Amen, Ndithi kuwe, ukuba uphawu kuphela ukuba sinikwe umqondiso esi sizukulwana!"
8:13 Waza wawandulula, yakhwela emkhombeni kwakhona, waza waya phesheya kolwandle.
8:14 Kwaye belibele ukuphatha izonka. Kwaye abazange babe nayiphi na esikhepheni, ngaphandle sisinye.
8:15 Kwaye wabayalela, bathi: "Cinga nililumkele igwele labaFarisi negwele likaHerode."
8:16 Baza baxoxa oku omnye komnye, bathi, "Kuba akukho sonka esinayo."
8:17 ke uYesu, ngokwazi oku, wathi kubo: "Kutheni na aniqondi ukuba ngokuba ningenazonka? Ngaba kakazi okanye ukuqonda? Ngaba usenalo ukungaboni entliziyweni yakho?
8:18 Ukuba amehlo, ngaba akuboni? Nineendlebe, aniva na? Ngaba ukukhumbula,
8:19 xa ndaqhekezela uyakuthanda ezintlanu phakathi amawaka amahlanu, zazingaphi na iingobozi zizele ngamaqhekeza enazithabathayo?"Bathi bona kuye, "Shumi elinambini."
8:20 "Kwaye xa izonka ezisixhenxe ezo ndaziqhekezela amawaka amane, akazange zazingaphi na iingobozi zizele ngamaqhekeza enazisusayo?"Yaye bathi kuye, "Sixhengxe."
8:21 Wathi ke yena kubo, "Kwenzeka njani na ukuba akukabi ukuqonda?"
8:22 Bahamba ke eBhetesayida. Bamzisela ke imfama kuye. Kwaye bacela kuye, ukuze azichukumise kuye.
8:23 Wathabatha umntu oyimfama ngesandla, Wamsa ngaphaya lali. Yaye ukubeka watshica emehlweni akhe, ngokubekwa izandla zakhe phezu kwakhe, wayibuza ukuba akwazi ukubona into.
8:24 Wakhangela phezulu, uthe, "Ndibona abantu kodwa bafana yimithi."
8:25 Okulandelayo wabeka izandla zakhe kwakhona emehlweni akhe, waza waqalisa ukubona. Kwaye waphiliswa, ukuze abone yonke into ngokucacileyo.
8:26 Wathi yena wamthumela endlwini yakhe, bathi, "Yiyani endlwini yakho, kwaye ukuba singene edolophini, mayingaxeleli bani. "
8:27 Esukile apho nabafundi bakhe, waya emizini yaseKesareya kaFilipu. Kwaye endleleni, wabuza abafundi bakhe, esithi kubo, "Kuthiwa ngabantu ndingubani na mna?"
8:28 Baphendula bathi kuye ngokuthi: "UYohane umbhaptizi, Eliya, ukanti abanye bathi mhlawumbi ngomnye wabaprofeti. "
8:29 Emva koko wathi kubo, "Kodwa ngokwenene, nina nithi ndingubani?"UPetros waphendula wathi kuye, "Wena unguye * uKrestu."
8:30 Kwaye wabakhuthaza, ukuba bangaxeleli nabani na ngaye.
8:31 Waqala ukubafundisa, okokuba uNyana woMntu umelwe kukuba eve ubunzima obukhulu, aze agatywe ngamadoda amakhulu, kwaye ababingeleli abakhulu, kunye nababhali, aze abulawe, kwaye emva kweentsuku ezintathu abuye avuke.
8:32 Ke kaloku wathetha ngokuphandle ilizwi. ke uPetros, ukuthatha eceleni, waqala ukulungisa kuye.
8:33 Kwaye ejika, wakhangela kubafundi bakhe, eyala Peter, bathi, "Suka uye emva kwam, uSathana, kuba bakhetha izinto kuThixo, kodwa izinto, unyamekele ezabantu. "
8:34 Ebizele ndawonye kuye isihlwele, kwanabafundi bakhe, Wathi yena kubo, "Ukuba nabani na ukhetha makandilandele, makazincame ngokwakhe, awuthwale umnqamlezo wakhe, andilandele.
8:35 Kuba othe uya bakhetha ukuba asindise ubomi bakhe, uya kulahlekelwa nguwo. Osukuba ke eya balahlekelwe ubomi bakhe, ngenxa yam nangenxa yeendaba ezilungileyo, wowusindisa.
8:36 Kuba Kuyinzuzo njani indoda, ukuba uthe wazuza ihlabathi liphela, ukanti wenzakalisa emphefumlweni wakhe?
8:37 okanye, ntoni na umntu, ibe sisananelo somphefumlo wakhe?
8:38 Kuba osukuba enako waneentloni ngam nangamazwi am, phakathi kwesi sizukulwana sikrexezayo, sonayo, noNyana womntu uya kuba neentloni ngaye, xa uya kufika esebuqaqawulini boYise, , enezithunywa ezingcwele. "
8:39 Wathi ke yena kubo, "Inene ndithi kuni, ukuba kukho abathile phakathi kwabo bemi apha abangayi kukha beve kufa, bade babubone ubukumkani bukaThixo ukufika ngamandla. "